Pep Guardiola Waa Tababaraha Qarniga,Imisa Koob Ayuu Ku Guulastay – Kooxda.com
Home 2018 April Ingiriiska, Wararka Maanta Pep Guardiola Waa Tababaraha Qarniga,Imisa Koob Ayuu Ku Guulastay
Pep Guardiola Waa Tababaraha Qarniga,Imisa Koob Ayuu Ku Guulastay
Wargayska Marca ayaa warbixin ka diyaarisay tababarayaasha ugu badan ee 10-kii sano ee ugu dambaysay koobabka ku guulaystay.
Wargayska reer Spain ayaa warbixinteeda ciwaan uga dhigtay “Guardiola Tababaraha 10-kii sano ee ugu dambaysay” kadib markii uu tababaraha reer Spain 23 koob ku guulaystay 10-kii sano ee ugu dambaysay isaga oo ka koobab badan tababaryaal badan.
Pep Guardiola ayaa ku guulaystay koobka premier League xilli ciyaareedkan inkasta oo ay 5 kulan ka harsan yihiin dhamaadka xilli ciyaareedkan.
47 jirka reer Spain ayaa sidoo kale ku guulaystay 23 koob oo ka mid ah 41 koob oo uu ciyaaray intii uu hogaaminayay kooxaha Bayern Munch,Barcelon iyo City.
Waxa ku xiga tababarihii hore ee kooxda PSG ee Laurent Blanc kaas oo ku guulaystay 15 koob oo uu kula guulaystay kooxda PSG iyo Bordeaux halka uu ku xigo tababaraha Man United ee Jose Mourinho kaas oo ku guulaystay 13 koob oo uu kula guulaystay Chelsea,Inter,Real iyo Man United.
Waxa ku sii xiga tababaraha khabiirka ah ee Carlo Ancelotti kaas oo ku guulaystay 11 koob oo uu kula guulaystay kooxaha Chelsea,PSG,Real Madrid iyo Bayern Munich halka uu ku xigo tababare Luis Enrique oo ku guulystay 9 koob oo uu kula guulaystay kooxda Barcelona.